कुन-कुन विषय पर्छन् अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको रोजाईमा ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
कुन-कुन विषय पर्छन् अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको रोजाईमा ?
प्रकाशित मिति: १० असार २०७५, आईतवार
अष्ट्रेलिया । पछिल्लो समय थुप्रै देशहरुले नेपाली विद्यार्थीहरुलाई आकर्षण गरेता पनि उनीहरुको पहिलो रोजाई भने अष्ट्रेलिया हो । उच्च शिक्षाको लागि महंगो मुलुकहरु मध्येको एक अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।
महंगो मुलुक भइकन पनि नेपाली विद्यार्थीहरु अष्ट्रेलिया तानिनुमा क्यारियर निर्माण र धन आर्जन बाटोमा त्यहाँको सरकारको स्पष्ट नीतिले हो ।
नेपाली विद्यार्थीहरु यसरी बढ्नुमा पढाइसँगै पार्ट टाईममा कामको राम्रो व्यवस्था, अध्ययन पुरा गरिसके पछि पनि ४ वर्षसम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था, बैंक ब्यालेन्समा न्यनिकरण बैंक ब्यालेन्सका लागि सबै बैंकबाट स्वीकार्य, पि।आर।को राम्रो अवसर, डिपेन्डेन भिसाको व्यवस्था आदि प्रमुख कारणहरु हुन् ।
अष्ट्रेलियामा आफ्नो अध्ययन पूरा गरिसके पछि अब ब्याचलर र मास्टर पुरा गर्ने विद्यार्थीले दुई दुई वर्ष, मास्टर पछि रिसर्च कोर्ष पूरा गर्नेले ३ वर्ष र पि.एच.डि. पूरा गर्नेले ४ वर्ष काम गर्न पाउने छन् । अष्ट्रेलिया पढाइको लागि मात्र नभई त्यही केही गर्छु भन्नेहरुका लागि पनि राम्रो अवसर भएको मुलुक हो ।
विकसित र ठूलो भौगोलिक अवस्था भएको मुलुक भएता पनि दक्ष जनशक्ति त्यहाँ अझै नपुगेकाले अष्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीहरुका लागि त्यही केही गरुन् भन्ने उद्देश्यले पि.आर.को समेत व्यवस्था गरिदिएको छ ।
अष्ट्रेलियामा पि.आर. पाउनको लागि विशेषत अंग्रेजी भाषामा दख्खल, ब्याचलर तथा मास्टरमा राम्रो अंकमा उत्तीर्ण र कुनै एक काममा दक्ष जस्ता कुराहरु पुरा गर्न सकेमा सजिलै पि.आर पाउन सक्छन् । यसका साथै अष्ट्रेलिया जाने जो कोही विद्यार्थीले डिपेन्डन भिसामा आफ्ना सन्तानलाई पनि लान सक्ने भएकोले पनि नेपाली विद्यार्थीहरुको पहिलो रोजाई अष्ट्रेलिया भएको हो ।
अष्ट्रेलिया विदेशी विद्यार्थीहरुको लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । यहाँ उपलब्ध धेरै कोर्सहरु, प्रयोगात्मक शिक्षण र कोर्ससंग सम्बन्धित करियरको राम्रो अवसरले गर्दा विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढेको हो । यहाँ अष्ट्रेलियामा पढाई हुने १० विभिन्न कोर्सहरुको बारेमा चर्चा गरिएको छ । यी कोर्सहरुमा विदेशी विद्यार्थीहरुको अझ बढी आकर्षण रहेको पाइन्छ ।
कुन-कुन विषय पर्छन् विद्यार्थीको रोजाईमा ?
अष्ट्रेलियामा बिजनेस कोर्स विदेशी विद्यार्थीहरुको पहिलो रोजाई बनेको छ । बिजनेस क्षेत्रमा विद्यार्थीहरुद्वारा मन पराइएका कोर्सहरु :
–बैंकिङ एण्ड फाइनान्स
–म्यानेजमेन्ट एण्ड इन्फर्मेसन सिस्टम
–बिजनेस म्यानेजमेन्ट एण्ड एड्मिनिस्ट्रेसन
धेरैजसो विदेशी विद्यार्थीहरु एमबिए अध्ययनको लागि अष्ट्रेलिया आउने गर्छन् । एमबीए कोर्स १८ महिना देखि ४ वर्षे कोर्स हुन्छ । यो कोर्स पार्ट टाइम र फुल टाइम दुवै विद्यार्थीहरुको लागि अनुकुल हुन्छ ।
२. सूचना प्रविधि (आई.टी)
आईटी पढ्ने विद्यार्थीहरुको संख्या अष्ट्रेलियामा बढ्दो क्रममा छ । यस कोर्समा प्राविधिक र सैद्धान्तिक ज्ञान ज्ञान दिईनुका साथै प्रयोगात्मक शिक्षण गराइन्छ । जसले गर्दा विद्यार्थिहरुले आफूले अपेक्षित व्यवसायिक ज्ञान हासिल गर्न सक्छन् । उपलब्ध समय र पैसा अनुसार विद्यार्थीहरुले यस कोर्स अन्तर्गतका विषय रोज्न सक्छन् ।
इन्जिनियरिङमा विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढ्दो छ । यस अन्तर्गतका कोर्सहरु यसप्रकार रहेका छन्
–कम्प्युटर साइन्स इन्जिनियरिङ
४. एग्रिकल्चरल साइन्स
एग्रिकल्चर पढ्ने विद्यार्थीहरुको लागि अष्ट्रेलियामा स्कोप बढिरहेको छ । एग्रिकल्चरल साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरुको संख्या अरु कोर्स पढ्नेहरूको तुलनामा कम हुनाले पनि यो कोर्स पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई बढी अवसर छ । यो कोर्सको लोकप्रियता विस्तारै बढ्ने क्रममा छ ।
५. हस्पिटालिटी एण्ड टुरिजम
हस्पिटालिटी र टुरिजममा रोजगारीको बढ्दो अवसरसंगै यो कोर्स पढ्ने विद्यार्थीहरु पनि बढिरहेका छन् । यो कोर्समा डिप्लोमा र एडभान्स्ड डिप्लोमा गर्न सकिन्छ । लामो अवधिको कोर्स पूरा गर्न चाहे स्नातक र स्नातकोत्तर पनि गर्न सकिन्छ ।
हेयर ड्रेसिङ नयाँ कोर्स हो । केही अलग र नयाँ खोज्ने विद्यार्थीहरुलाई यो कोर्सले आकर्षित गरेको छ । यो कोर्समा विभिन्न सर्टिफिकेट तह र डिप्लोमा तह गर्न सकिन्छ । यो कोर्सले व्यवसायिक ज्ञान दिने हुँदा करियरको राम्रो सम्भावना रहन्छ ।
७. पाइलट लाइसेन्स कोर्स
पाइलट लाइसेन्स कोर्स हिम्मतिलो विद्यार्थीहरुको लागि राम्रो करियर दिने कोर्स हो । यस कोर्समा भोकेसनल पढाई हुन्छ । यो कोर्स अरु कोर्सको तुलनामा केही महँगो हुन्छ ।
नर्सिङ पढ्ने विदेशी विद्यार्थीहरुको संख्या अष्ट्रेलियामा बढ्दो छ । अष्ट्रेलियामा नर्सिङ्ग पढ्ने विद्यार्थीहरुको लागि करियरको राम्रो अवसर पनि छ ।
यो कोर्स विशेषगरि व्यवसायिक फोटोग्राफरहरुको लागि हो,जो आफ्नो ज्ञान र सीप बढाउन चाहन्छन् । फोटोग्राफीमा रुचि राख्ने नयाँ विद्यार्थीहरुले पनि यो कोर्स गर्न सक्छन् । फोटोग्राफी करियरको राम्रो अवसर हो ।
आर्ट्स अन्तर्गतका कोर्सहरु
यी कोर्सहरु लिने विद्यार्थीहरुको लागि विश्वका धेरैजसो ठाउँमा करियरको राम्रो अवसर छ ।
धनाढ्यहरुको सूचीमा रहेका शेष घले दम्पती अष्ट्रेलियाका डलर अर्बपति
अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियाका धनाढ्यहरुको सूचीमा रहेका गैरआवासीय नेपाली शेष घले र जमुना गुरुङ डलर अर्बपति […]
अष्ट्रेलियामा नेपाली सवार कार दुर्घटना, एकको मृत्यु, चार घाइते
अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियामा नेपाली सवार कार दुर्घटना हुँदा एक नेपालीको मृत्यु भएको छ भने चार जना घाइते भएका […]
अष्ट्रेलियामा धेरैको पीआर सपना चकनाचुर,कतिपय अष्ट्रेलियाबाट नै बाहिरिनुपर्ने समस्या
अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियामा आफूले काम गर्दै गरेको र स्पोन्सर गरीदिने कम्पनी बीचमै बन्द हुनाले धेरैको पीआर […]
अष्ट्रेलियामा पीआर लिन नयाँ नियम परिर्वतनपछि नयाँ तरंग,नेपालीलाई कस्तो असर गर्ला ?
सञ्जिब अर्याल - अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियमा आप्रवासीहरुको बढ्दो जनसंख्यालाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यको साथ […]
अस्ट्रेलियामा नयाँ अभिभावक भिसा:महँगो र अनुपयुक्त,आप्रवासी समुदायको असन्तुष्टि
टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रियाबाट जन्मेकी पहिलो महिलाले जन्माइन् बच्चा
कांग्रेसको राष्ट्रिय जागरण अभियान: ७७ जिल्लामा ७७ प्रतिनिधि, को कहाँ ? (नामसहित)
यस्तो छ अष्ट्रेलियाको नयाँ पीआर नीति, अंक सिस्टममा ठूलो फेरबदल